कोही मान्छे कालो र कोही मान्छे गोरो किन हुन्छ ? यो पढ्नुहोस् - Mitho Khabar
कोही मान्छे कालो र कोही मान्छे गोरो किन हुन्छ ? यो पढ्नुहोस्
June 27, 2021 Mitho KhabarLeaveaComment on कोही मान्छे कालो र कोही मान्छे गोरो किन हुन्छ ? यो पढ्नुहोस्
तपाइ हामी सबैको रंग एकै प्रकारको हुदैँन । एउटै परिवारमा पनि कोही कालो त कोही गोरो वर्णका हुन्छन् । वैज्ञानिकका अनुसार, मानिसको छालाको रंग फरक फरक हुनुमा शरीरको छालामा भइरहने विभिन्न रासायनिक प्रक्रियाहरु नै हुन् । छालामा क्रोमोजिन नामक तत्व अरु रसायनसँग मिल्दा यसले विशेष रंगको निर्माण गर्छ । यसले नै छालाको रंग निर्माण गर्दछ ।
यदी कुनै मानिसमा यो तत्व छैन भने छालाको रंग अति नै सेतो हुने गर्दछ । मानिसको छालाको वास्तविक रंग क्रिम जस्तो सेतो हुन्छ । तर क्रोमोजिनले यो फरक पर्न जान्छ । यसको कारण छालामा रहेको मेलानिन नामक तत्व पनि कारक हो । मानिस कालो होस् या गोरो होस्, उसको शरीरमा अनिवार्य रुपमा त्यो मेलानिन हुन्छ । मेलानिन पनि मूलतः दुई थरिका हुन्छन् । यसमध्ये पहिलो प्रकार फियोमेलानिन हो जो रातोदेखि पहेलो रंगको हुन्छ । दोस्रो इयुमेलानिन हो जो गाढा कलेजीदेखि कालो हुन्छ । र गोरो छाला हुने मानिसमा फियोमेलानिन सक्रिय हुन्छ । मेलानिनको संख्या र आकारको उपस्थितिले मानिसको रंगमा भुमिका खेल्दछ ।
यस्तै अन्य कारक भने सूर्यबाट पराबैजनी किरण पृथ्वीसम्म आउने भएकाले गर्मी महिनामा घाममा बस्दा छाला कालो हुन्छ । यस अलावा पृथ्वीको भू–मध्य रेखामा सूर्यको प्रकाश धेरै पर्ने भएकाले त्यहाँका मानिसहरुको छालामा मेलानिन धेरै मात्रामा पाइन्छ र उनीहरुको वर्ण कालो हुन्छ ।
बेला-बेला सामाजिक संजालमा देखिरहने यी बर्मेली सुन्दरीको बोल्ड अवतार(भिडियो सहित)
तपाईँले मिठो मान्दै खाने पानीपुरीको बारेमा यी कुरा थाहा छ ? सबैले जानी राखौं
यी हुन् १२ घन्टामा यति धेरै पु’रु’षसँग यौ८न स’म्प’र्क गर्ने म’हि’ला ( भिडियो सहित)
June 21, 2021 Mitho Khabar
सामाजिक सन्जालमा भाईरल यि युबतिको चतिर्कला हेर्नुहोस् भिडीयो सहित
April 14, 2020 mithokhabar
पुरुष यौ’नकर्मी मनोज भन्छन्- ४ सय बढी महिलासंग यौ’न सम्पर्क गरिसके
February 9, 2020 mithokhabar
जस्तोसुकै बिजी भए पनि एक पटक अव’श्य पढौ ! नपढे तपाईलाई प’छुतो हुनेछ !
कोठामा एक्लै बसेकी छोरीको मोबाईल अचान’क हेर्दा आमा-बुबाको होʼसहवा’स उ’ड्यो !
महिलाले पुरुषमा खो’ज्छन् य’स्ता कुराहरु(भिडियो सहित हेर्नुहोस)
प्रहरीलाई पनि चकित पार्ने गरि गरे यस्तो काम, यस्ता काम गरे बापत कति लिन्छन पैसा ?
असल र माया गर्ने पाटनरको खोजीमा छु, भेट्ने भए यहाँ आउनु
आजको राशिफल: असार १७ गते बिहिवार २०७८ साल
दा’इजो नदिएको भन्दै श्रिमतिको यसरी करङ नै भाचिदिएर श्रिमान फ’रार, कठै (हेर्नुस् भिडियो)
मेरो क्या’न्सर लागेको बुवालाई ठिक पार्दिनुस् बरु हामी भोकै बस्छौ, कठै छोरी (भिडियो सहित)
यसो गर्दा महिलाहरुलाई छिटो यौ न सन्तुष्टि मिल्छ, जान्नुहोस!
यस्ता तरकारीले दिमागमा किरा उब्जाउँछ : ख्याल नगरे ज्यानपनि लिनसक्छ ज्या*न
पढाइ खर्च जुटाउन आँप बेचिरहेकी बालिका,१२ वोटा आप को यति धेरै रकम मा किनिदिए एक व्यक्तिले,को हुन् त ति व्यक्ति?
सपनामा नागदेवताको दर्शन पाउनु भयो भने ,यस्ता हुन्छन संकेतहरू ॐ लेखेर एक Share गर्नुस अधुरो काम बन्नेछ। पुरा पढ्नुहोला
सर्पको टो,काई बाट ८ वार्षिय बालकको नि,धन दया माया हुनेले Rip लेखेर 1 Share गर्नुस् ।
दिनको जम्मा तीस रुपैयाँ बचत गर्नुहोस र बन्नुहोस करोडपती, ल हेरौं आईडिया सहित
५ बर्ष पछी मिल्दै छ यी ४ राशिलाई जीवनभर कहिले मिल्न नसकेको सफलता हेर्नुहोस् तपाईंको राशि पर्‍यो कि…
एकाविहानै यस कारण डराए केपी ओली, बोलाए बैठक
लोभ र लभले डोर्‍याएको वेश्यालयको यात्रा
‘हाम्रो टिम माथी सरकारले दमन गर्यो, चाडै रिहाई गरियोस्’ : पल शाह
उठ्ने बित्तिकै कालिनागको दर्शन गरि ओम लेखेर सेयर गर्नु होला हजुर ले सोचेको पुरा हुनेछ
गणेश भगवानले सबैको मनो’कांक्षा पुरा गरुन, असार १६ गते बुधबार, आज तपाईको भाग्य कस्तो छ हेर्नुहोस रा’शिफल,,,
इ च्छा अ नुसार छोरा वा छोरी जन्मा उने त रिका यस्तो रहेछ
७० बर्षको बुढि आमा यसरी छमछम नाच्नुहुन्छ ,आहा हेर्नुस् उहाका दर्जनौ टिकटकहरु साथै अन्तर्बार्ता (हेर्नुस् भिडियो )